IprogeCAD, enye indlela eya kwi-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/ProgeCAD, enye indlela eya ku-AutoCAD
ProgeCAD isisombululo esinexabiso eliphantsi esekelwe kwiTheknoloji ye-IntelliCAD 6.5, enokumiselwa ngokufanelekileyo njengotshintsho lwesofthiwe kwizinga le-AutoCAD.
Masibone ukuba yiyiphi progeCAD:
Inyaniso yokuba iyafana ne-AutoCAD kuyo yomibini imiyalelo kunye nokusebenza kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuqeqesha oochwephesha abasele benolwazi ngeqonga. Ke iintshukumo ezinje ngokuphathwa kwamanqanaba, okubhaliweyo okuninzi, iindlela zokuzenzekelayo kunye nemiyalelo ngokwayo isebenza ngendlela efanayo ne-AutoCAD nangona kukho iincwadana ezahlukeneyo kunye nezifundo zevidiyo onokufunda kuzo.
Ukukhupha i-AutoCAD kwezinye iinkalo
ProgeCAD Zinezinye izisombululo ezenziwa yi-AutoCAD kwiinguqulelo zakutsha ezifana nale:
Uncedisa iifayile kwi-AutoCAD 2.5 inguqulo kwi-2009 version
Unenkxaso yokulungelelanisa kunye nokukhangela, apho ungenza ulawulo lomgangatho weefayile ngokunika imiyalelo ngendlela efanelekileyo
Guqula iifayile zePDD ukuze ungene
Inomodyuli wokuguqula ukusuka kwi-raster ukuya kwi-vector
Unokuxhasa ngokusesikweni kwe-ecw ne-jpg2000 imifanekiso
Kukho ezinye iimveliso ezizalisekisa
I-ProgeCAD ivela kwiinguqu ezimbini: I-Standard kunye neNgcali nangona kukho ezinye izicelo ezizodwa zokwandisa amandla ezinjenge:
progeEARTHLe nguqulelo ujoliswe ucando lomhlaba kunye nobunjineli kubandakanywa Amanqaku okulawula usebenzisa COGO, ulawulo superficioes DTM, imigca nentaba kunye nezinye iimpawu ngesimo kulawulo kuquka indlela kuyilo yemigca.
progeCAM, Le ngqungquthela yindlela yokwakha kunye nokuvelisa
ProgeOffice, ngaleli nongezo ungasebenzisana neenkqubo zeMicrosoft Office, njengee-spreadsheets ze-Excel
progeCAD Viewer DWG, le nguqulo ukujonga, ukuprinta, ukunikela kunye nokubuyisela kwakhona iifayile ze-dwg kwi-2.5 version ukuya kwi-AutoCAD 2009
Abaguquleli befayile yeProgeCAD, ezi zithengwa ngokwahlukileyo ukuba zikwazi ukuthumela ngaphandle kwaye zifake iifayile ezifana ne: Google Sketchup!, IGES, STEP, STL, 3D Studio, CNC, OBJ kwaye kukho ukongezwa ukukwazi ukungenisa amaphuzu kwiifayile zetekisi.
Le nto yinto ekhangayo kakhulu ngeprogeCAD, kuba iilayisenisi ezilinganayo ne-AutoCAD LT zibizwa ngokuba yi progeCAD Standard walk kwi $ 250 kunye ne-399 eyi-professional.
Kukho neelayisenisi zethungelwano ezingasetyenziselwa i-usb ezithantayo okanye eziphathekayo, ezi zihamba nge-$ 599
Xa ndiqukumbela, progeCAD yinto isisombululo ebalulekileyo unegalelo kumaqonga phantsi iindleko ezizezinye ukuphepha pirating AutoCAD ukuba ixabiso wakufika, umdla ukuba ingasebenza ku Linux and Mac usebenzisa Ukufana ubuchwepheshe kunye njengoko kuchaziwe kwiphepha, uguqulelo I-2009 iqukethe indlela yokusebenzisana neGoogle Earth.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, unokubonisana kwiphepha le progeCAD kwaye u khusele i Inguqu yovavanyo lweentsuku ze-30 ezinemisebenzi yonke.
Francisco Vidal uthi:
I-Progecad ineengxaki ezininzi ezingakhange zixazululwe. Sijonge kwiforum yakho kwaye sabona ukuba abanye babenalo kwaye akukho nasisombululo sempendulo.
kwiofisi yethu siyivavanye kunye ne-clone ye-Chinese cwcad. Akulunganga, kodwa ekugqibeleni sakhetha i-bricscad, ngaphandle koko basenza isicwangciso soncedo lobuchwepheshe esasiyimfuneko.
ngokwemigaqo yokubambisana esicinga ukuba yinto engcono kakhulu kuyo yonke into esiyivavanyayo kude kube ngoku, zonke iinguqulelo zeefestile esinazo kunye neenguqu zokuhlola ipropadad zinyamalale. (sisebenza ngeWindows Vista kunye neXP)